Xog Cajiib Ah Oo Uu Cristiano Ronaldo Dhigay Xilli Ciyaareedkan Oo Aan Cidna Ogayn – Kooxda.com
Home 2018 February Spain, Wararka Maanta Xog Cajiib Ah Oo Uu Cristiano Ronaldo Dhigay Xilli Ciyaareedkan Oo Aan Cidna Ogayn
Xog Cajiib Ah Oo Uu Cristiano Ronaldo Dhigay Xilli Ciyaareedkan Oo Aan Cidna Ogayn
Xiddiga kooxda Real Madrid ee Cristiano Ronaldo ayaa u muuqda mid ku soo laabtay qaab ciyaareedkiisii fiicnaa todobaadyadii ugu dambeeyay isaga oo dhaliyay saddexley kulankii ay kooxda Los Blancos ku xasuuqday kooxda Real Sociedad.
Xiddiga reer Portugal ee 33 jirka ah ayaa haatan dhaliyay 7 gool oo La Liga ah 4-tii kulan ee ugu dambaysay ee ay ku jiraan min labadii gool ee uu ka dhaliyay kooxaha Deportivo La Coruna & Valencia.
Ronaldo ayaa si xun ku bilowday xilli ciyaareedkan isaga oo 5 kulan lagu ganaaxay kadib markii uu kala tuuray garsoorihii dhexe dhexaadinayay kulankii Spanish Super Cup ee ay guusha ka gaareen kooxda Barcelona.
Tababaraha Los Blancos ee Zinedine Zidane ayaa si aad ah u sugayay soo laabashada xiddigiisa ugu fiican laakiin waxa u soo laabtay hadhkii CR7.
Xaqiiqada ayaa ah in uu Ronaldo ku fashilmay in uu gool dhaliyo horyaalka La Liga ilaa guushii 2/1 ahayd ee ay ka gaareen kooxda Getafe October 14.
Si kasta ha ahaatee xiddigan ayaa muddo bil ah ka soomay soo taabashada shabaqa horyaalka La Liga ee xilli ciyaareedkan.
Xilli ay Real Madrid dhibaatoonayso horyaalka La Liga 17 dhibcoodna ka dambayso kooxda Barcelona kuna jirto kaalinta 4-aad ee kala saraynta.
Laakiin miyuu dhab ahaantii ku jiraa xilli ciyaareed xun? xiddiga reer Portugal ayaa dhaliyay goolal ka badan goolashii uu dhaliyay wakhtigan oo kale xilli ciyaareedkii 2016/2017 waxana uu ku guulaystay abaalmarinta Ballon d’Or sanadkii 2017.
Ronaldo ayaa xilli ciyaareedkan dhaliyay 23 gool 28 kulan oo tartamada oo dhan isaga oo laba gool ka badan goolashii uu dhaliyay 12 bilood ka hor.
Waliba xiddigii hore ee Man United ayaa ciyaaray kulamo ka yar kulamadii uu wakhtigan oo kal ciyaaray xilli ciyaareedkii hore isaga oo 149 daqiiqo ka yar intii uu ciyaaray xilli ciyaareedkii hore.
Taas ayaa la macno ah cel-celis ahaanta goolasha ee Ronaldo ayaa cajiib ah isaga oo 101.91% ku dhaliyay goolkii marka loo eego 118.71% oo uu ku dhaliyay xilli ciyaareedkii hore.
Laadka saxda ah ee uu CR7 laagay ayaa la mid ah midkii uu xilli ciyaareedkii hore dhigay isaga oo 48.34% xilli ciyaareedkan laagay laag sax ah halka uu xilli ciyaareedkii hore laagay 48.36%.
Si kasta ha ahaatee Ronaldo ayaa xilli ciyaareedkan laagay laag ka badan xilli ciyaareedkii hore isaga oo xilli ciyaareedkan laagay 188 marka loo bar-bar dhigi 155 oo xilli ciyaareedkii hore ah.
Inkasta oo uu qaab ciyaareed shaqsi ah ku jiro hadana midaas ayaa Real Madrid ka caawin weyday in ay gaaraan guulo badan xilli ciyaareedkan.